သူစိမျးကောငျးရငျ တကယျကို ဆှမြေိုးတှထေကျ သာပါတယျ ။ - Tameelay
လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျဆိုတာ အသှငျလဲ မတူကွသလို စိတျဓာတျခငျြးလဲ မတူနိုငျကွဘူး အမိဝမျးတဈခုတညျးက ထှကျတဲ့ ညီအဈကိုမောငျနှ အခငျြးခငျြးတောငျ တူဖို့မလှယျကူတာ တခွားသူစိမျးတဈယောကျနဲ့ဆို ပို့လို့တောငျ မလှယျကူဘူးလေ ။
လူတဈယောကျနဲ့ တဈလလောကျ မိတျဆှဖွေဈဖို့ လှယျမယျလို့ ထငျလား ကောငျးတာ မကောငျးတာတှေ သိလာတဲ့တဈနထေိ့ လကျတှဲတှေ မဖွုတျပဲ ရှဆေ့ကျပေါငျးနိုငျဖို့ဆိုတာ ထငျသလောကျတော့မလှယျဘူးလေ ။
လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခြိနျတှအေကွာကွီး ပေါငျးသငျးဆကျဆံကွတဲ့အခါ တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျ ပိုသိလာရတယျ ။
ဒီလို ပိုသိလာရတဲ့အခါ ကောငျးကှကျခညျြးပဲ ကှကျမွငျနပွေနျရငျလဲ ဖားရာကတြယျ ။
မကောငျးတာခညျြးပဲ ကှကျမွငျနရေငျ အဲ့တာကြ အပေါငျးအသငျးနဲ့ မတူတော့ဘူး အနီးကပျရနျသူလိုပါပဲ မကောငျးပွောဖို့သကျသကျ ပခုံးဖကျပေါငျးနတောမြိုးလေ ။
တဈနှဈ . . . သကျတမျးရှိတဲ့ သူငယျခငျြး တဈစု အရငျလို ပခုံးဖကျပေါငျးနိုငျသေးရငျ တျောတျောလေးကို ရရှေညျခံတဲ့ ဆကျဆံရေးလို့ ပွောလို့ရနပေါပွီ ။
သုံးနှဈ . . . ကွာသှားတဲ့အခါ ကိုယျ့ဆှမြေိုးသားခငျြးတှလေို ဖွဈသှားကွပွီ ။
၅၂၈ ဆိုသော ဖွူစငျတဲ့ မတ်ေတာတှနေဲ့ ခညျြနှောငျထားတဲ့လကျတှေ ဘဝလမျးတှကေို လြှောကျရငျး ရညျရှယျရာမတူလို့ လမျးတှေ မတူနိုငျတာပဲရှိတာပါ မွဲတော့ မွဲပါတယျ ။
၅ နှဈ . . . . ၁၀ နှဈ ဒီနခေ့တျေမှာ ဒီလိုနှဈတှအေကွာကွီး ပေါငျးကွသငျးကွဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျတော့သလောကျကို ဖွဈသှားပွီလေ ။
သူစိမျးကောငျးရငျ တကယျကို ဆှမြေိုးတှထေကျ သာပါတယျ ။ မငျးဘာကောငျလဲ ငါဘာကောငျလဲဆိုတဲ့ အတ်တတှေ တံခါးဝမှာခြိတျထားပွီး နှပျခြေးတှဲလောငျးက ဘဝတှအေကွောငျးပွနျပွောငျးပွောခငျြပွောမယျ ။
မငျးလကျရှိရာထူးက ဘာလဲဆိုတာ ဂရုမစိုကျပဲ အရငျလို တဟီးဟီးတဟားဟား ရယျခငျြရယျကွမယျ ။
မိဘတှကေို ပွောပွခှငျ့မရခဲ့တဲ့ ဒဏျရာတှအေကွောငျး အစအဆုံး ရငျဖှငျ့ကွမယျ ။ နားလညျမှုတှေ ယုံကွညျမှုတှေ စတဲ့ ခေါငျးစဉျတှေ တပျဖို့ မလိုဘူး ။
မငျးလဲ ဖွဈနရေငျ ငါလဲ ငါဖွဈနရေငျ ဒီ ဆကျဆံရေးတှကေ ဆကျပွီး တညျမွဲနဦေးမှာပါ ။
မကျြရညျတှေ ကစြရာရှိလာတဲ့အခါ မရှကျနဲ့ မကွောကျနဲ့ အားရပါးရငိုခပြဈလိုကျလို့ရတယျ ရယျစရာမောစရာတှေ ကွုံလာတဲ့အခါ ဘယျမကျြနှာကိုမှ မကွညျ့နဲ့ အတူတူ ရယျမောခှငျ့ရှိတယျ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျ သူ့ဘဝနဲ့ သူပါပဲ ဒါပမေယျ့ ဆုံခှငျ့ရှိတဲ့ အခါတိုငျးမှာ အရငျတုနျးကအကွောငျးတှေ ပွနျပွီးတော့ ပွောပိုငျခှငျ့တော့ ရှိသေးတယျမဟုတျလား ။
၁၅၀၀ အခဈြတှလေို ပိုငျရမှ ဆိုငျရမှဆိုတဲ့အတ်တတှေ မလိုဘူး အနားမှာရှိမှ ဘေးနားရှိမှဆိုတဲ့ လောဘတှေ မရှိဘူး ဘယျအရာ ဘယျဌာနပေဲရောကျနေ ရောကျနေ ၅၂၈ ဟူသော မတ်ေတာဖွငျ့ ခညျြသော ကွိုးတှကေ မွဲပါတယျ ။
မေတ္တာဖြင့်ချည်သောလက်တွေမြဲစေသား. . . . .
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတာ အသွင်လဲ မတူကြသလို စိတ်ဓာတ်ချင်းလဲ မတူနိုင်ကြဘူး အမိဝမ်းတစ်ခုတည်းက ထွက်တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှ အချင်းချင်းတောင် တူဖို့မလွယ်ကူတာ တခြားသူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ဆို ပို့လို့တောင် မလွယ်ကူဘူးလေ ။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်လလောက် မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ လွယ်မယ်လို့ ထင်လား ကောင်းတာ မကောင်းတာတွေ သိလာတဲ့တစ်နေ့ထိ လက်တွဲတွေ မဖြုတ်ပဲ ရှေ့ဆက်ပေါင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက်တော့မလွယ်ဘူးလေ ။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်တွေအကြာကြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြတဲ့အခါ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ပိုသိလာရတယ် ။
ဒီလို ပိုသိလာရတဲ့အခါ ကောင်းကွက်ချည်းပဲ ကွက်မြင်နေပြန်ရင်လဲ ဖားရာကျတယ် ။
မကောင်းတာချည်းပဲ ကွက်မြင်နေရင် အဲ့တာကျ အပေါင်းအသင်းနဲ့ မတူတော့ဘူး အနီးကပ်ရန်သူလိုပါပဲ မကောင်းပြောဖို့သက်သက် ပခုံးဖက်ပေါင်းနေတာမျိုးလေ ။
တစ်နှစ် . . . သက်တမ်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်စု အရင်လို ပခုံးဖက်ပေါင်းနိုင်သေးရင် တော်တော်လေးကို ရေရှည်ခံတဲ့ ဆက်ဆံရေးလို့ ပြောလို့ရနေပါပြီ ။
သုံးနှစ် . . . ကြာသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလို ဖြစ်သွားကြပြီ ။
၅၂၈ ဆိုသော ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ ချည်နှောင်ထားတဲ့လက်တွေ ဘ၀လမ်းတွေကို လျှောက်ရင်း ရည်ရွယ်ရာမတူလို့ လမ်းတွေ မတူနိုင်တာပဲရှိတာပါ မြဲတော့ မြဲပါတယ် ။
၅ နှစ် . . . . ၁၀ နှစ် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဒီလိုနှစ်တွေအကြာကြီး ပေါင်းကြသင်းကြဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့သလောက်ကို ဖြစ်သွားပြီလေ ။
သူစိမ်းကောင်းရင် တကယ်ကို ဆွေမျိုးတွေထက် သာပါတယ် ။ မင်းဘာကောင်လဲ ငါဘာကောင်လဲဆိုတဲ့ အတ္တတွေ တံခါးဝမှာချိတ်ထားပြီး နှပ်ချေးတွဲလောင်းက ဘ၀တွေအကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောချင်ပြောမယ် ။
မင်းလက်ရှိရာထူးက ဘာလဲဆိုတာ ဂရုမစိုက်ပဲ အရင်လို တဟီးဟီးတဟားဟား ရယ်ချင်ရယ်ကြမယ် ။
မိဘတွေကို ပြောပြခွင့်မရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေအကြောင်း အစအဆုံး ရင်ဖွင့်ကြမယ် ။ နားလည်မှုတွေ ယုံကြည်မှုတွေ စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ဖို့ မလိုဘူး ။
မင်းလဲ ဖြစ်နေရင် ငါလဲ ငါဖြစ်နေရင် ဒီ ဆက်ဆံရေးတွေက ဆက်ပြီး တည်မြဲနေဦးမှာပါ ။
မျက်ရည်တွေ ကျစရာရှိလာတဲ့အခါ မရှက်နဲ့ မကြောက်နဲ့ အားရပါးရငိုချပစ်လိုက်လို့ရတယ် ရယ်စရာမောစရာတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်မျက်နှာကိုမှ မကြည့်နဲ့ အတူတူ ရယ်မောခွင့်ရှိတယ် ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် သူ့ဘ၀နဲ့ သူပါပဲ ဒါပေမယ့် ဆုံခွင့်ရှိတဲ့ အခါတိုင်းမှာ အရင်တုန်းကအကြောင်းတွေ ပြန်ပြီးတော့ ပြောပိုင်ခွင့်တော့ ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား ။
၁၅၀၀ အချစ်တွေလို ပိုင်ရမှ ဆိုင်ရမှဆိုတဲ့အတ္တတွေ မလိုဘူး အနားမှာရှိမှ ဘေးနားရှိမှဆိုတဲ့ လောဘတွေ မရှိဘူး ဘယ်အရာ ဘယ်ဌာနေပဲရောက်နေ ရောက်နေ ၅၂၈ ဟူသော မေတ္တာဖြင့် ချည်သော ကြိုးတွေက မြဲပါတယ် ။